guuleed | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 125
Dhageyso:Warka Subax Idaacada Alfurqaan.
Shil Gaari oo khasaare dhaliyay oo ka dhacay dalka Iiraan.
Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa.
Maraykanka oo kudhowaad 1000 Ruux ku dilay Muusil.
Author Archives: guuleed	Dhageyso:Warka Subaxnimo.
Warka Subax waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 14 04 2016.	Read More »
Maamulka Axmed oo Xoog Ku Ciidameynaya Dhalinyaro.(Maqal)
Wararka naga soo gaaraya magaalooyinka uu ka taliyo maamulka Axmed Madoobe ayaa ku waramaya in halkaasi laga raafayo dhalinyarada. Dhalinyarada ayaa si xoog ah loo askaraynayaa si looga horgeeyo xarakada shabaabul mujaahidiin. Odayaasha dhaqanka Jubooyinka ayaa war kasoo saaray raafka socda ee ka dhanka ah dhalinyarada. Nabadoon Cabdi shiilow oo uwaramay idaacadda alfurqaan ayaa sheegay in tallaabadaan maamulka qaaday muujinayso ...	Read More »
Dhageyso:Xasan Sheekh oo Lagu Beeniyay in Dalka Aannu Gumeysi Ku Jirin.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shalay sheegay in dalka Soomaaliya gumeysi uusan ku jirin. Warka xasan sheekh waxaa ku diiday nabadoon Maxamed Axmed Guuleed. Nabadoonka ayaa bixiyay cadeymo muujinaya gumeysiga dalka uu ku jiro. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed ayaa ka hadlay farqiga udhaxeeya gumeystihii hore iyo kan hada ku dul habsaday dalka. Gumeystaha wax badan oo Soomaaliya uu ka rabo waxa ...	Read More »
Dhageyso:Dhuuxa Wareysiyada Alfurqaan.
Dhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya. Waxaa inagala qeybgala siyaasiyiin,aqoonyahano iyo qeybaha kale ee bulshada. Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 13 04 2016.lite	Read More »
Dhageyso:Warka Duhurnimo Alfurqaan.
Si aad uhesho qodobadii ku baxay warka duhur alfurqaan guji linkiga hoose oo dhageyso warka oo dhameestiran HALKAAN KA DHAGEYSO WARKA DUHUR	Read More »
Ciidanka Hadda Jira Ma Lagu Tilmaami Karaa Ciidamada Xoogga Dalka.?(Dhageyso)
shalay Waxay ku beegnayd 56 guuradii kasoo wareegatay markii la aas aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ciidankaasi ayaa ahaa ciidan difaaca dalka iyo dadka islamarkaana cadowgooda ugu horeeya ahaa Itoobiya. Hadda ciidanka jira wey ka duwanyihiin ciidamadii horre waxaana ay ka barbar dagaalamaan cadowga Soomaaliya soo jireenka ah ee Itoobiya. Hadaba idaacadda Alfurqaan ayaa qabatay falanqeyn ay wadaagayaan Maxamed Buulle ...	Read More »
Beesha Bartire oo Caleemo saaratay Ugaas Cusub.(Maqal)
Xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday Degmada Xagar ee wilaayada islaamiga ah Jubooyinka. Odayaal Dhaqan,mas’uuliyiin ka socotay wilaayada ayaa ku sugnaa halka xafladu ka dhacday. ujeedka xaflada loo qabtay ayaa ahayd in beesha Bartire oo kamid ah beelaha Absame ay doortaan Ugaas Cusub. Waxgaradka Beesha ayaa isku raacay in Ugaaska Cusub ee Bartire uu Noqdo Ugaas ...	Read More »
Dhageyso:Diyaaradaha Maraykanka oo Shacab Ku Laayay Dulleedka Kismaayo.
Habeen Hore diyaarado laga leeyahay Maraykanka ayaa si ba’an uduqeeyay deegaanka Yoontoy oo dhaca dulleedka Kismaayo. Sadex ruux oo mid kamid ah uu yahay oday 70 sano jir ah oo Lagu Magacaabo Maxamed Xasan Abuukar ayaa ku dhintay duqeynta. Idaacadda ALfurqaan ayaa wareysatay wiil uu dhalay odayga dhintay iyo mid kamid ah odayaasha dhaqanka Yoontoy. Waxa ay sheegeen in Maraykanku ...	Read More »
Qodobo kala duwan ayaa lagu soo qaatay warka subax ee ka dhageyso qeybta hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 13 04 2016.lite	Read More »
Dhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya. Waxaa inagala qeybgala siyaasiyiin,aqoonyahano iyo qeybaha kale ee bulshada. Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 12 04 2016.lite	Read More »
Page 125 of 149« First...100110120«123124125126127	»	130140...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan